Vechidiki—Mungagadzirira Sei Kuti Muzobhabhatidzwa?
“Ndakafarira kuita zvamunoda, haiwa Mwari wangu.”—PIS. 40:8.
4 Chimbofunga nezvemuenzaniso waTimoti. Ainyatsoziva Magwaro. Akanga adzidziswa “kubvira paucheche” naamai vake naambuya vake. Kunyange zvakadaro, Pauro akakurudzira Timoti kuti: “Rambira pazvinhu zvawakadzidza uye zvawakaitwa kuti uve nechokwadi nazvo.” (2 Tim. 3:14, 15) Maererano nerimwe bhuku, shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “zvawakaitwa kuti uve nechokwadi nazvo,” rinopa pfungwa “yekunyatsogutsikana iwe pachako kuti chimwe chinhu ndechechokwadi.” Timoti akanga aita kuti chokwadi chive chake. Akachibvuma, kwete nekuti amai vake naambuya vake vakanga vamuudza kuti adaro, asi nekuti akanga anyatsofunga nezvacho achibva agutsikana kuti ndicho chaiva chokwadi.—Verenga VaRoma 12:1.
7 Kana ukashingaira pakudzidza uri wega uchanzwisisa mhinduro dzemibvunzo yaunogona kunge uinayo, uye uchava nechokwadi nezvaunotenda. (Mab. 17:11) Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kukubatsira kuita izvozvo. Vakawanda vakaona zvichibatsira kushandisa bhurocha rinonzi The Origin of Life—Five Questions Worth Asking uye bhuku rinonzi Is There a Creator Who Cares About You? Uyewo vechidiki vakawanda vari kunakidzwa uye vari kubatsirwa nechikamu chiri pajw.org. chakanzi “Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?” Chikamu ichi chinowanikwa pakanzi ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI > VARI KUYARUKA. Nyaya imwe neimwe iripo inokubatsira kuti unyatsova nechokwadi nezvinodzidziswa neBhaibheri.
10 Bhaibheri rinoti: “Kutenda, kana kusina mabasa, kwakafa.” (Jak. 2:17) Kana uine chokwadi nezvaunotenda, hapana mubvunzo kuti zvichaonekwa nezvaunoita. Asi ndezvipi zvaungaita? Bhaibheri rinotaura ‘nezvemabasa matsvene omufambiro uye mabasa okuzvipira kuna Mwari.’—Verenga 2 Petro 3:11.
12 Ko “mabasa okuzvipira kuna Mwari” ndeapi? Mabasa aya anosanganisira zvaunoita muungano, zvakadai sekupinda misangano uye kuita basa rekuparidza. Anosanganisirawo zvaunoita usingaonekwi nevamwe, zvakadai sekunyengetera uye kudzidza uri wega. Munhu anenge azvitsaurira kuna Jehovha haaiti zvinhu izvi nekungoti chete ndizvo zvaanofanira kuita. Asi anoratidza mafungiro aiva naMambo Dhavhidhi uyo akati: “Ndakafarira kuita zvamunoda, haiwa Mwari wangu, mutemo wenyu uri mukati mangu.”—Pis. 40:8.
13 Chikamu chakanzi “Pepa Rokushandira” chiri papeji 308 ne309 mubhuku raMibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 2, chinogona kukubatsira kuti uve nezvinangwa pakunamata kwako. Pamapeji aya pane mibvunzo yaunofanira kupindura uchiita zvekunyora mhinduro dzacho. Mimwe mibvunzo yacho ndeyekuti; “Minyengetero yako yakajeka zvakadini, uye inoratidzei nezvokuda kwaunoita Jehovha?” “Zvii zvaunobatanidza paunodzidza uri woga?” “Unobuda muushumiri kunyange vabereki vako vasingabudi here?” Mapeji aya ane paunogona kunyora zvauchada kuita panyaya yekunyengetera, kudzidza uri wega uye kuita basa rekuparidza.
19 Jehovha anokuda chaizvo, asi Satani haana kana basa newe. Satani haana kana zvisvinu zvaanopa vanhu vanomutsigira. Angambozviwana kupi? Iye pachake haana kana chinhu chinofadza chekufunga nezvacho, uye haana kana tariro. Saka angakupa sei zvaasina iye pachake? Chaanongoda chete ndechekuti uparadzwewo sezvaachaitwa!—Zvak. 20:10.
“Ndingavandudza Sei Minyengetero Yangu?”—January-March 2009
“Ndingaita Sei Kuti Ndinakidzwe Nokuverenga Bhaibheri?”—July-September 2009
“Ndiri Munhu Akaita Sei?”—October-December 2011
“Ndingaitei Kuti Ndinakidzwe Nokuverenga Bhaibheri?”—April-June 2012
“Sei Ndichifanira Kuenda Kumisangano yechiKristu?”—July-September 2012
Kubva mubhuku raMibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda
“Ndingaita Sei Kuti Ndinakidzwe Nokunamata Mwari?”—chitsauko 38
“Nei Ndichitya Kutaura Zvandinotenda Kuchikoro?”—chitsauko 17
“Nei Ndichifanira Kurarama Maererano Nemirayiro yeBhaibheri?”—chitsauko 34
“Ndingava Sei Shamwari yaMwari?”—chitsauko 35
“Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?”—chitsauko 37